ပအို့ဝ် (ဗမာ - ပအိုဝ်းသမိုင်း၊ အိုင်ပီအက်စ် - [pəo̰lùmjóʊ], သို့မဟုတ်တောင်သူ၊ ရှမ်း - ပ၊ ယူအက်စ်; အရှေ့ဖိုးကရင်၊ တံတား၊ စကရင်၊ တီ၊ သူ၊ ပအို့ဝ်ဟုလည်းခေါ်သည်) သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏တတိယအကြီးဆုံးလူမျိုးစုဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ ၁,၈၀၀,၀၀၀ ခန့်  မှ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသောလူ ဦး ရေနှင့်အတူ  ပအိုဝ်း၏အခြားအမည်မှာ PaU, Phya, Piao, Taungthu, Taungsu, Tongsu and Kula ။
ဗမာ - ပအိုဝ်းနိုင်ငံများ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကလောအနီးရှိပအိုအမျိုးသမီးတစ် ဦး
လူ ဦး ရေစုစုပေါင်း ၁,၄၀၀၀၀၀ (၂၀၁၄ est ။ ) လူ ဦး ရေထူထပ်သောဒေသများမြန်မာ၊ ထိုင်းဘာသာစကားများPa'O, မြန်မာ၊ ထိုင်းဘာသာ။
Pa'O သည်ဘီစီ ၁၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိယနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံ၏သထုံဒေသတွင်အခြေချခဲ့သည်။ သမိုင်းအစဉ်အလာအရ PaOO သည်ရောင်စုံအဝတ်အစားများ ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဘုရင်အနော်ရထာသည်သထုံ Makaka မွန်ဘုရင်ကိုအနိုင်ယူသည်အထိ ပအိုဝ်းကျေးကျွန်များသည်သူတို့၏အနေအထားကိုပြသရန်မဲနယ်ဆေးဆိုးသည့်အဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ရသည်။
ပအိုဝ်းလူမျိုးများသည်ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးလူမျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကရင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့်ပဲခူးတိုင်းတို့တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ယနေ့ပ'ိပက္ခများသည်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိမယ်ဟောင်ဆောင်ခရိုင်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီး၊ ၎င်းတို့သည်တိဘက် - ဗမာနွယ်ဖွားများဖြစ်ပြီးကရင်လူမျိုးတို့၏ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုဝေမျှကြသည်။
၎င်းတို့တွင်သီးခြားအုပ်စုနှစ်စုပါဝင်သည်။ သထုံအခြေစိုက်မြေနိမ့် Pa'O နှင့်တောင်ကြီးအခြေစိုက် Highland Pa'O တို့ဖြစ်သည်။ Pa'O အဖွဲ့ခွဲ ၂၄ ခုရှိသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။
ပအိုဝ်းအဖွဲ့ခွဲများမှာထီးရိ၊ ဂျမ်ဇမ်၊ ဂျာကပအို၊ ခရိုင်၊ ခွန်လွန်း၊ ခွန်လတန်တီယာ၊ ကွန်ဂျမ်၊ လွိုင်အိုင်၊ ပဒေါင်၊ ပါ့ဂ်၊ ပနန်း၊ ပန်နန်၊ နန်ကေး၊ မစ်ကန်၊ မိကလန်း၊ တာတမ်၊ တောင်သာ၊ တေမ်၊ တနို၊ ဖားဖရိုင်းနှင့်ယဉ်တိုင်။
ပအို့ဝ်ကသပိတ်သစ်ပင်၊ ကြက်သွန်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီး၊ အာလူး၊ ဆန်၊ မြေပဲ၊ ပဲ၊ နှမ်းမျိုးစေ့၊
မီး Rocket ပွဲတော်
ဧပြီလမှဇူလိုင်လအတွင်းကျင်းပမည့်မီးပုံးပျံပွဲတော်ကိုကျင်းပသောပုဝူးလိုင်မင်းကိုဂုဏ်ပြုသည်။ ပွဲတော်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစပါးစိုက်ပျိုးရာသီအတွင်းရွာများ၌မိုးများရွာရန်ဖြစ်သည်။ Pa'O အစဉ်အလာအရမိုးတိမ်ရွာစေခြင်းအားဖြင့်ဒုံးကျည်များကိုပစ်ခတ်သည်။ ရွာသူကြီးသည်ဒုံးကျည်အရွယ်အစားကိုဆုံးဖြတ်သည်။ အကြီးမားဆုံးဒုံးကျည်များသည်ကီလိုဂရမ် ၂၀ အထိပါဝင်ပြီး ၅ မိုင်မှ ၆ မိုင်အထိရှိသည်။ မူလက ၀ါးဖြင့်ပြုလုပ်သောဒုံးကျည်များကိုလက်ရှိတွင်သံဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ပစ်ခတ်မှုမပြုလုပ်မီတစ်ကြိမ်တွင်ဒေသခံဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုတစ်စုံတစ် ဦး ၏ပခုံးပေါ်သယ်ဆောင်သည်။ ပွဲတော်တစ်ခုသည် စုပေါင်း၍ တစ်ပတ်အတူတကွစုဝေးကြသောကြောင့်မတူညီသောကျေးရွာများအကြားစည်းလုံးမှုနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုပြသသည်။ Pwe ဆိုသည်မှာပွဲတော်ကိုဆိုလိုသည်။ Lue ဆိုသည်မှာလှူဒါန်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ Phaing သည်အပြစ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။
ပအိုအမျိုးသားနေ့ (Den See Lar Bway) ကိုမတ်လတွင်ကျရောက်သောတအာင်းလပြည့်နေ့၌ကျင်းပသည်။ အမျိုးသားနေ့သည်မွေးနေ့ပွဲကိုအမျိုးသားနေ့တွင်ကျင်းပသောဘုရင် Suriya Janthar ကဲ့သို့ဘိုးဘေးများနှင့်အတိတ်ခေါင်းဆောင်များအားအမှတ်ရရန်နေ့ဖြစ်သည်။ တောင်ကြီးမှပွဲတော်တစ်ခုကျင်းပပြီးနောက်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပခဲ့သည်။
ပအို့ဝ်လူမျိုးအများစုသည်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလိုက်နာကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့၏ပွဲတော်အများစုသည်ဗုဒ္ဓဘာသာပွဲတော်နေ့များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ အချို့သော Pa'O များသည်ခရစ်ယာန်များဖြစ်ပြီးအချို့သည် Animistbeliefs ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ Poy Sang Long (ဗမာ: ရှင်ရွှင်မြည်; Pa'O: ပွယ်နသျှင်နလောင်ꩻ) သည်ငယ်ရွယ်သောယောက်ျားလေးများကိုအစပြုဘုန်းကြီးများအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ လူကြီးဘ ၀ သို့ရောက်သောအခါဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရခြင်းကိုမိသားစုအခမ်းအနားတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဥပုသ်လအတွင်းသြဂုတ်လမှအောက်တိုဘာလအထိပအို Lip May May ဘိုတွင် Pa'O လူငယ်များပါ ၀ င်သည် (Pa'O: ပွယ်လိပ်မေမေဗို၊ ဗမာ - မီးရှည်လှည့်ပွဲ) ။ လစဉ်လပြည့်ညများ၊ လဆန်းပိုင်းညများနှင့်လတစ်ဝက်ညများ၌ ၀ါးရပ်ကွက်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ကြီးထွားလာသည့်ကြိုးများပေါ်တွင်ရပ်ဆိုင်းထားသည့်မီးအိမ်များဖြင့်သူတို့၏ဒေသခံဘုရားကျောင်းကိုဝိုင်းရံကြသည်။ ၀ါးတိုင်များကိုဘုရားကျောင်းအနီးရှိမီးအိမ်များကိုသုံးကြိမ်သယ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဖယောင်းတိုင်များသယ်ဆောင်လာသည်နှင့်အမျှဗုဒ္ဓကိုလေးစားကြောင်းပြသည်။
Pa'O ၏မူလဇာတ်လမ်းက၎င်းတို့သည် shaman (weizza) နှင့်နဂါးမိန်းမတို့မှဆင်းသက်လာသည်ဟုဖော်ပြသည်။
ငရုတ်သီးများကိုစုဆောင်းနေသည့် Pa'O အမျိုးသမီး
မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းရှိပအို့လူမျိုးများသည်အများအားဖြင့်အနက်ရောင်၊ Pa'O ၏ရိုးရာအဝတ်အစားမှာတာဘန်း၊ အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီ၊ အနက်ရောင်သို့မဟုတ်ရေတပ်ဂျာကင်အင်္ကျီများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အနက်ရောင်ဘောင်းဘီရှည်များပါဝင်သည်။ Pa'O အမျိုးသမီးများ၏ရိုးရာဝတ်စုံသည်အင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ၊ ဂျာကင်အင်္ကျီ၊ ကြာရှည်ခံဒူးခေါင်းနှင့်ပန်ကာနှင့်ကြီးမားသောပုံသဏ်hairာန်ဆံပင်တံပြားနှစ်ခုဖြစ်သည်။ အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောပါပါအိတ်ဆောင်တွင် Pa'O အလံတံဆိပ်ကပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဇော်ဂျီနှင့်နဂါးကိုသူတို့၏မူလဇာတ်လမ်းမှကိုယ်စားပြုသည်။ အမျိုးသားများသည်ဓားများ၊ သံကြိုးများသို့မဟုတ်ကြာရှည်သောဓါးငယ်များကိုသယ်ရန်အနီရောင်အိတ်ကြီးတစ်လုံးကိုအသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည်ကြံသို့မဟုတ်ဝါးလောက်လွှဲကိုအသုံးပြုကြသည်။ မြန်မာနိမ့်ကျသူများမှာမြန်မာစတိုင်များ ၀ တ်ဆင်သည်။
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်အစပျိုးရန်, ပထမယောက်ျား၏မိဘများကပထမ ဦး ဆုံးထိုလူငယ်၏မိဘများကထိုမိန်းမငယ်၏မိဘများအားသူတို့၏သမီးကိုလက်ထပ်ပြီးလက်ထပ်ခွင့်တောင်းပါ။ သူမ၏မိဘများသည်သူတို့၏သမီး၏ဆန္ဒကိုလေးငါးရက်ကြာဆွေးနွေးနိုင်သည်။ ထုံးစံအရလက်ထပ်ထိမ်းမြားပွဲအခမ်းအနားတွင် guests ည့်သည်များသည်သတို့သားနှင့်သတို့သမီးနှစ် ဦး စလုံး၏လက်ကောက်ဝတ်များကိုချည်ကြိုးချည်။ အတူတကွပေါင်းစည်းကာသူတို့၏ဇနီးမောင်နှံအားသူတို့၏အကောင်းဆုံးဆန္ဒဖြင့်ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။ အများအားဖြင့်လက်ဆောင်များတွင်ငွေ၊ လယ်ယာမြေ၊ အိမ်များ၊ ကျွဲများ၊
ရွာသားများသည်အသုဘအစီအစဉ်များကိုဂရုစိုက်ကြသည်။ အလောင်းကိုအိမ်၌နှစ်ညအိပ်ထားရှိသည်။ အစားအစာများကိုဘုန်းတော်ကြီးများအားကမ်းလှမ်းရန်ချက်ပြုတ်ထားသည်။ ထို့အပြင်ကဒ်ပြားဂိမ်းများကိုကစားသူများသည်ထွက်ခွာသွားသူများအားအဆက်မပြတ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်ရက်သုံးရက်အကြာတွင်မိသားစုသည်သေဆုံးသွားသူအားချီးမွမ်းသည်။ သာမန်လူများကိုသင်္ဂြိုဟ်ကြသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးများကိုသင်္ဂြိုဟ်ကြသည်။
ခန်စိန် ၀ င်းကိုကမ္ဘောဇမောင်ဖုန်းရီကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်Augustဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအင်းယားတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ မန္တလေးအနုပညာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ BA ဖြင့်ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးသည်နှင့်သူ၏ဝတ္ထုများနှင့်မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါးများအတွက်ဆုများနှင့်ဆုများစွာကိုရရှိခဲ့သည်။  သူ၏အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သောငါပြောချင်သော Pa'O သမိုင်းအကြောင်းကို ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သူသည်မြဝတီ၊ ရွှေမဝါ၊ ငွေဆောင်၊ မြတ်မင်္ဂလာနှင့်ဒေါကျောက်သမဂ္ဂဇင်းများအတွက်ဆောင်းပါးများကိုရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ တောင်ကြီးရှိစာပေနှင့်မဂ္ဂဇင်းအသင်းကိုသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူသည်ရှမ်းပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကောင်စီ၏လစဉ်မဂ္ဂဇင်းဖြစ်သောကမ္ဘောဇနယူးသတင်းလွှာတွင်အယ်ဒီတာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးသူသည်ရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသမီးကော်မတီဝင်ဖြစ်သည်။ သူသည်တောင်ကြီးတွင်နေထိုင်ပြီးစာပေများဆက်လက်လေ့လာပြီးဆက်လက်ရေးသားခဲ့သည်။ သူသည်ကျော်ကြားသောဟောပြောသူလည်းဖြစ်သည်။
ခွန်သာ Doon (၁၉၄၀-၁၉၇၈) သည် Pa'O ဂီတ၏အစောပိုင်းကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်ပထမဆုံး Pa'O ခေတ်သစ်တီးဝိုင်းကို ၁၉၇၀ နှစ်များအစောပိုင်းတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူ၏ကျော်ကြားသောသီချင်းတစ်ပုဒ်မှာ "Tee Ree Ree" ဖြစ်ပြီး Pa'O စည်းလုံးညီညွတ်မှုအကြောင်းသီချင်းဖြစ်သည်။ ဒီသီချင်းကိုဒီနေ့ခေတ်ရိုးရာပွဲတော်တွေမှာသီချင်းဆိုနေတုန်းပဲ။ သူသည်ရွှေတြိဂံ၏ဂစ်တာ - မြန်မာပြည်၏ရိုးရာနှင့်ပေါ့ပ်တေးဂီတ (မြန်မာ)၊ ၂။  စုစည်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သောအနုပညာရှင်အချို့သည်သူရေးသားခဲ့သောအဖုံးသီချင်းများ။
ဦး အောင်ခမ်းထီသည်ပအိုဝ်းအမျိုးသားအစည်းအရုံး (PNO) ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ပါတီတွင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်ကိုယ်စားလှယ်သုံး ဦး ရှိပြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်တွင်တစ် ဦး နှင့်ဒေသခံလွှတ်တော်တွင် ၆ ဦး ရှိသည်။  PNO အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းခွန်ဆန်းလွင်သည်လက်ရှိတွင်ပအို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဥက္ကဌဖြစ်သည်။ 
အောင်ခမ်းထ၊ PNO ၏ခေါင်းဆောင် (ပအို့ဝ်အမျိုးသားအဖွဲ့)
နန်းခင်ဇေယျာ၊ Miss Myanmar International (၂၀၁၂)
^ Interactive Myanmar မြေပုံ၊
^ ခခ Pa-Oh အမျိုးသားအဖွဲ့ (၂၀၁၀) ။ Pyidaungzu De-Ga ပဟေ:ိပသမဂ္ဂပပြည်ထောင်စု (ပြည်ထောင်စုထဲကပအိုဝ်းအဖွဲ့။ ပအို့ဝ်အဖွဲ့။ စ။ ၂၃)
Ni Luပြီ ၁၀ ရက် ၂၀၁၄ နီလူးဖင်း (မီးရော့ကက်ပွဲတော်အကြောင်းသီချင်း)
^ နန္ဒာချန် (မေ ၂၀၀၄) ။ ပအို့ဝ် - မေ့လျော့သူများ .ရာဝတီ။ 8 မတ်လ 2012 ရယူရန်။
^ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 2ပြီလ ၂ ရက်တွင်ပြန်လည်ရရှိခဲ့သောပအို့အ်နေ့အထိမ်းအမှတ်သတင်း
ဗန်းတင်အောင် (အောက်တိုဘာ ၁၉၇၈) ။ ကိုလိုနီခေတ်ဗမာလူ့အဖွဲ့အစည်း (ကိုလိုနီခေတ်သမိုင်းသမိုင်း) ။ စ။ ၂၂ ။
^ Tee Ree Ree Cover ဗားရှင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ Aprilပြီ ၂ ရက်
^ Sublime Frequency: ရွှေတြိဂံ၏ဂစ်တာများ - မြန်မာရိုးရာနှင့်ပေါ့ပ်ဂီတ (မြန်မာ)၊ Vol ။ 2. 18 2014ပြီ 2014 ထုတ်ယူ
Alt 22ပြီလ ၂၂ ရက်၊
^ ကျော်ကျော်ဆု (ဇွန် ၃ ရက်) ။ "ဗဟုသုတမရှိရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မကြိုးစားနိုင်ဘူး" .ရာဝတီ။ 19 ဇွန် 2014 ရယူရန်။
ပအို့ဝျ (ဗမာ - ပအိုဝျးသမိုငျး၊ အိုငျပီအကျဈ - [pəo̰lùmjóʊ], သို့မဟုတျတောငျသူ၊ ရှမျး - ပ၊ ယူအကျဈ; အရှဖေို့းကရငျ၊ တံတား၊ စကရငျ၊ တီ၊ သူ၊ ပအို့ဝျဟုလညျးချေါသညျ) သညျမွနျမာနိုငျငံ၏တတိယအကွီးဆုံးလူမြိုးစုဖွဈသညျ။ လူ ဦး ရေ ၁,၈၀၀,၀၀၀ ခနျ့  မှ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ခနျ့ရှိသောလူ ဦး ရနှေငျ့အတူ  ပအိုဝျး၏အခွားအမညျမှာ PaU, Phya, Piao, Taungthu, Taungsu, Tongsu and Kula ။
ဗမာ - ပအိုဝျးနိုငျငံမြား
ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး၊ ကလောအနီးရှိပအိုအမြိုးသမီးတဈ ဦး
လူ ဦး ရစေုစုပေါငျး ၁,၄၀၀၀၀၀ (၂၀၁၄ est ။ ) လူ ဦး ရထေူထပျသောဒသေမြားမွနျမာ၊ ထိုငျးဘာသာစကားမြားPa'O, မွနျမာ၊ ထိုငျးဘာသာ။
Pa'O သညျဘီစီ ၁၀၀၀ ဝနျးကငျြရှိယနခေ့တျေမွနျမာနိုငျငံ၏သထုံဒသေတှငျအခွခေခြဲ့သညျ။ သမိုငျးအစဉျအလာအရ PaOO သညျရောငျစုံအဝတျအစားမြား ၀ တျဆငျခဲ့သညျ။ ဘုရငျအနျောရထာသညျသထုံ Makaka မှနျဘုရငျကိုအနိုငျယူသညျအထိ ပအိုဝျးကြေးကြှနျမြားသညျသူတို့၏အနအေထားကိုပွသရနျမဲနယျဆေးဆိုးသညျ့အဝတျအစားမြားကိုဝတျဆငျရသညျ။
ပအိုဝျးလူမြိုးမြားသညျရှမျးပွညျနယျတှငျဒုတိယမွောကျအကွီးဆုံးလူမြိုးဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးတို့သညျကရငျပွညျနယျ၊ ကယားပွညျနယျ၊ မှနျပွညျနယျနှငျ့ပဲခူးတိုငျးတို့တှငျနထေိုငျကွသညျ။ ယနပေ့'ိပက်ခမြားသညျထိုငျးနိုငျငံမွောကျပိုငျးရှိမယျဟောငျဆောငျခရိုငျသို့ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေပွီး၊ ၎င်းငျးတို့သညျတိဘကျ - ဗမာနှယျဖှားမြားဖွဈပွီးကရငျလူမြိုးတို့၏ဘာသာစကားနှငျ့ယဉျကြေးမှုကိုဝမြှေကွသညျ။
၎င်းငျးတို့တှငျသီးခွားအုပျစုနှဈစုပါဝငျသညျ။ သထုံအခွစေိုကျမွနေိမျ့ Pa'O နှငျ့တောငျကွီးအခွစေိုကျ Highland Pa'O တို့ဖွဈသညျ။ Pa'O အဖှဲ့ခှဲ ၂၄ ခုရှိသညျဟုယုံကွညျရသညျ။
ပအိုဝျးအဖှဲ့ခှဲမြားမှာထီးရိ၊ ဂမျြဇမျ၊ ဂြာကပအို၊ ခရိုငျ၊ ခှနျလှနျး၊ ခှနျလတနျတီယာ၊ ကှနျဂမျြ၊ လှိုငျအိုငျ၊ ပဒေါငျ၊ ပါ့ဂျ၊ ပနနျး၊ ပနျနနျ၊ နနျကေး၊ မဈကနျ၊ မိကလနျး၊ တာတမျ၊ တောငျသာ၊ တမျေ၊ တနို၊ ဖားဖရိုငျးနှငျ့ယဉျတိုငျ။
ပအို့ဝျကသပိတျသဈပငျ၊ ကွကျသှနျ၊ ကွကျသှနျဖွူ၊ ငရုတျသီး၊ အာလူး၊ ဆနျ၊ မွပေဲ၊ ပဲ၊ နှမျးမြိုးစေ့၊
မီး Rocket ပှဲတျော
ဧပွီလမှဇူလိုငျလအတှငျးကငျြးပမညျ့မီးပုံးပြံပှဲတျောကိုကငျြးပသောပုဝူးလိုငျမငျးကိုဂုဏျပွုသညျ။ ပှဲတျော၏ရညျရှယျခကျြမှာစပါးစိုကျပြိုးရာသီအတှငျးရှာမြား၌မိုးမြားရှာရနျဖွဈသညျ။ Pa'O အစဉျအလာအရမိုးတိမျရှာစခွေငျးအားဖွငျ့ဒုံးကညျြမြားကိုပဈခတျသညျ။ ရှာသူကွီးသညျဒုံးကညျြအရှယျအစားကိုဆုံးဖွတျသညျ။ အကွီးမားဆုံးဒုံးကညျြမြားသညျကီလိုဂရမျ ၂၀ အထိပါဝငျပွီး ၅ မိုငျမှ ၆ မိုငျအထိရှိသညျ။ မူလက ၀ါးဖွငျ့ပွုလုပျသောဒုံးကညျြမြားကိုလကျရှိတှငျသံဖွငျ့ပွုလုပျသညျ။ ပဈခတျမှုမပွုလုပျမီတဈကွိမျတှငျဒသေခံဘုရားရှိခိုးကြောငျးကိုတဈစုံတဈ ဦး ၏ပခုံးပျေါသယျဆောငျသညျ။ ပှဲတျောတဈခုသညျ စုပေါငျး၍ တဈပတျအတူတကှစုဝေးကွသောကွောငျ့မတူညီသောကြေးရှာမြားအကွားစညျးလုံးမှုနှငျ့ခငျမငျရငျးနှီးမှုကိုပွသသညျ။ Pwe ဆိုသညျမှာပှဲတျောကိုဆိုလိုသညျ။ Lue ဆိုသညျမှာလှူဒါနျးခွငျးကိုဆိုလိုသညျ။ Phaing သညျအပွဈမြားကိုဖယျရှားခွငျးဖွဈသညျ။
ပအိုအမြိုးသားနေ့ (Den See Lar Bway) ကိုမတျလတှငျကရြောကျသောတအာငျးလပွညျ့နေ့၌ကငျြးပသညျ။ အမြိုးသားနသေ့ညျမှေးနပှေဲ့ကိုအမြိုးသားနတှေ့ငျကငျြးပသောဘုရငျ Suriya Janthar ကဲ့သို့ဘိုးဘေးမြားနှငျ့အတိတျခေါငျးဆောငျမြားအားအမှတျရရနျနဖွေ့ဈသညျ။ တောငျကွီးမှပှဲတျောတဈခုကငျြးပပွီးနောကျပှဲကွီးတဈခုကငျြးပခဲ့သညျ။
ပအို့ဝျလူမြိုးအမြားစုသညျဗုဒ်ဓဘာသာကိုလိုကျနာကွသညျ။ ဆိုလိုသညျမှာသူတို့၏ပှဲတျောအမြားစုသညျဗုဒ်ဓဘာသာပှဲတျောနမြေ့ားပျေါတှငျအခွခေံသညျ။ အခြို့သော Pa'O မြားသညျခရဈယာနျမြားဖွဈပွီးအခြို့သညျ Animistbeliefs ကိုထိနျးသိမျးထားသညျ။ Poy Sang Long (ဗမာ: ရှငျရှငျမွညျ; Pa'O: ပှယျနသြှငျနလောငျꩻ) သညျငယျရှယျသောယောကျြားလေးမြားကိုအစပွုဘုနျးကွီးမြားအဖွဈစတငျခဲ့သညျ။ လူကွီးဘ ၀ သို့ရောကျသောအခါဘုနျးတျောကွီးတဈပါးအဖွဈခနျ့အပျခွငျးခံရခွငျးကိုမိသားစုအခမျးအနားတဈခုအဖွဈသတျမှတျသညျ။ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျဥပုသျလအတှငျးသွဂုတျလမှအောကျတိုဘာလအထိပအို Lip May May ဘိုတှငျ Pa'O လူငယျမြားပါ ၀ ငျသညျ (Pa'O: ပှယျလိပျမမေဗေို၊ ဗမာ - မီးရှညျလှညျ့ပှဲ) ။ လစဉျလပွညျ့ညမြား၊ လဆနျးပိုငျးညမြားနှငျ့လတဈဝကျညမြား၌ ၀ါးရပျကှကျမြားကိုထောကျပံ့ခွငျးဖွငျ့ကွီးထှားလာသညျ့ကွိုးမြားပျေါတှငျရပျဆိုငျးထားသညျ့မီးအိမျမြားဖွငျ့သူတို့၏ဒသေခံဘုရားကြောငျးကိုဝိုငျးရံကွသညျ။ ၀ါးတိုငျမြားကိုဘုရားကြောငျးအနီးရှိမီးအိမျမြားကိုသုံးကွိမျသယျဆောငျရနျအသုံးပွုသညျ။ ဖယောငျးတိုငျမြားသယျဆောငျလာသညျနှငျ့အမြှဗုဒ်ဓကိုလေးစားကွောငျးပွသညျ။
Pa'O ၏မူလဇာတျလမျးက၎င်းငျးတို့သညျ shaman (weizza) နှငျ့နဂါးမိနျးမတို့မှဆငျးသကျလာသညျဟုဖျောပွသညျ။
ငရုတျသီးမြားကိုစုဆောငျးနသေညျ့ Pa'O အမြိုးသမီး
မွနျမာနိုငျငံအထကျပိုငျးရှိပအို့လူမြိုးမြားသညျအမြားအားဖွငျ့အနကျရောငျ၊ Pa'O ၏ရိုးရာအဝတျအစားမှာတာဘနျး၊ အဖွူရောငျရှပျအင်ျကြီ၊ အနကျရောငျသို့မဟုတျရတေပျဂြာကငျအင်ျကြီမြားနှငျ့အမြိုးသားမြားအတှကျအနကျရောငျဘောငျးဘီရှညျမြားပါဝငျသညျ။ Pa'O အမြိုးသမီးမြား၏ရိုးရာဝတျစုံသညျအင်ျကြီ၊ အင်ျကြီ၊ ဂြာကငျအင်ျကြီ၊ ကွာရှညျခံဒူးခေါငျးနှငျ့ပနျကာနှငျ့ကွီးမားသောပုံသဏျhairာနျဆံပငျတံပွားနှဈခုဖွဈသညျ။ အမြိုးသားရောအမြိုးသမီးရောပါပါအိတျဆောငျတှငျ Pa'O အလံတံဆိပျကပျထားသညျ။ ၎င်းငျးသညျဇျောဂြီနှငျ့နဂါးကိုသူတို့၏မူလဇာတျလမျးမှကိုယျစားပွုသညျ။ အမြိုးသားမြားသညျဓားမြား၊ သံကွိုးမြားသို့မဟုတျကွာရှညျသောဓါးငယျမြားကိုသယျရနျအနီရောငျအိတျကွီးတဈလုံးကိုအသုံးပွုကွသညျ။ အမြိုးသမီးမြားသညျကွံသို့မဟုတျဝါးလောကျလှဲကိုအသုံးပွုကွသညျ။ မွနျမာနိမျ့ကသြူမြားမှာမွနျမာစတိုငျမြား ၀ တျဆငျသညျ။
လကျထပျထိမျးမွားရနျအစပြိုးရနျ, ပထမယောကျြား၏မိဘမြားကပထမ ဦး ဆုံးထိုလူငယျ၏မိဘမြားကထိုမိနျးမငယျ၏မိဘမြားအားသူတို့၏သမီးကိုလကျထပျပွီးလကျထပျခှငျ့တောငျးပါ။ သူမ၏မိဘမြားသညျသူတို့၏သမီး၏ဆန်ဒကိုလေးငါးရကျကွာဆှေးနှေးနိုငျသညျ။ ထုံးစံအရလကျထပျထိမျးမွားပှဲအခမျးအနားတှငျ guests ညျ့သညျမြားသညျသတို့သားနှငျ့သတို့သမီးနှဈ ဦး စလုံး၏လကျကောကျဝတျမြားကိုခညျြကွိုးခညျြ။ အတူတကှပေါငျးစညျးကာသူတို့၏ဇနီးမောငျနှံအားသူတို့၏အကောငျးဆုံးဆန်ဒဖွငျ့ကောငျးခြီးပေးခဲ့သညျ။ အမြားအားဖွငျ့လကျဆောငျမြားတှငျငှေ၊ လယျယာမွေ၊ အိမျမြား၊ ကြှဲမြား၊
ရှာသားမြားသညျအသုဘအစီအစဉျမြားကိုဂရုစိုကျကွသညျ။ အလောငျးကိုအိမျ၌နှဈညအိပျထားရှိသညျ။ အစားအစာမြားကိုဘုနျးတျောကွီးမြားအားကမျးလှမျးရနျခကျြပွုတျထားသညျ။ ထို့အပွငျကဒျပွားဂိမျးမြားကိုကစားသူမြားသညျထှကျခှာသှားသူမြားအားအဆကျမပွတျပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးအတှကျနညျးလမျးတဈခုဖွဈသညျ။ နှဈရကျသုံးရကျအကွာတှငျမိသားစုသညျသဆေုံးသှားသူအားခြီးမှမျးသညျ။ သာမနျလူမြားကိုသွင်ျဂိုဟျကွသညျ။ ဘုနျးတျောကွီးမြားကိုသွင်ျဂိုဟျကွသညျ။
ခနျစိနျ ၀ ငျးကိုကမ်ဘောဇမောငျဖုနျးရီကို ၁၉၄၈ ခုနှဈAugustဂုတျလ ၃၁ ရကျနတှေ့ငျရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျးမွောကျပိုငျးအငျးယားတှငျမှေးဖှားခဲ့သညျ။ မန်တလေးအနုပညာနှငျ့သိပ်ပံတက်ကသိုလျမှ BA ဖွငျ့ဘှဲ့ရရှိခဲ့ပွီးသညျနှငျ့သူ၏ဝတ်ထုမြားနှငျ့မဂ်ဂဇငျးဆောငျးပါးမြားအတှကျဆုမြားနှငျ့ဆုမြားစှာကိုရရှိခဲ့သညျ။  သူ၏အကြျောကွားဆုံးဖွဈသောငါပွောခငျြသော Pa'O သမိုငျးအကွောငျးကို ၁၉၈၅ ခုနှဈတှငျပုံနှိပျထုတျဝခေဲ့သညျ။ သူသညျမွဝတီ၊ ရှမေဝါ၊ ငှဆေောငျ၊ မွတျမင်ျဂလာနှငျ့ဒေါကြောကျသမဂ်ဂဇငျးမြားအတှကျဆောငျးပါးမြားကိုရေးသားခဲ့သညျ။ ၁၉၉၃ ခုနှဈမှစ၍ တောငျကွီးရှိစာပနှေငျ့မဂ်ဂဇငျးအသငျးကိုသဘာပတိအဖွဈဆောငျရှကျခဲ့သညျ။ သူသညျရှမျးပွညျနယျငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကောငျစီ၏လစဉျမဂ်ဂဇငျးဖွဈသောကမ်ဘောဇနယူးသတငျးလှာတှငျအယျဒီတာအဖွဈတာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ပွီးသူသညျရှမျးပွညျနယျအမြိုးသမီးကျောမတီဝငျဖွဈသညျ။ သူသညျတောငျကွီးတှငျနထေိုငျပွီးစာပမြေားဆကျလကျလလေ့ာပွီးဆကျလကျရေးသားခဲ့သညျ။ သူသညျကြျောကွားသောဟောပွောသူလညျးဖွဈသညျ။
ခှနျသာ Doon (၁၉၄၀-၁၉၇၈) သညျ Pa'O ဂီတ၏အစောပိုငျးကမှတျတမျးတငျခဲ့သူတဈ ဦး ဖွဈသညျ။ သူသညျပထမဆုံး Pa'O ခတျေသဈတီးဝိုငျးကို ၁၉၇၀ နှဈမြားအစောပိုငျးတှငျတညျထောငျခဲ့သညျ။ သူ၏ကြျောကွားသောသီခငျြးတဈပုဒျမှာ "Tee Ree Ree" ဖွဈပွီး Pa'O စညျးလုံးညီညှတျမှုအကွောငျးသီခငျြးဖွဈသညျ။ ဒီသီခငျြးကိုဒီနခေ့တျေရိုးရာပှဲတျောတှမှောသီခငျြးဆိုနတေုနျးပဲ။ သူသညျရှတွေိဂံ၏ဂဈတာ - မွနျမာပွညျ၏ရိုးရာနှငျ့ပေါ့ပျတေးဂီတ (မွနျမာ)၊ ၂။  စုစညျးမှုတှငျပါ ၀ ငျသောအနုပညာရှငျအခြို့သညျသူရေးသားခဲ့သောအဖုံးသီခငျြးမြား။
ဦး အောငျခမျးထီသညျပအိုဝျးအမြိုးသားအစညျးအရုံး (PNO) ၏ခေါငျးဆောငျဖွဈသညျ။ ပါတီတှငျပွညျသူ့လှတျတျောတှငျကိုယျစားလှယျသုံး ဦး ရှိပွီးအမြိုးသားလှတျတျောတှငျတဈ ဦး နှငျ့ဒသေခံလှတျတျောတှငျ ၆ ဦး ရှိသညျ။  PNO အဖှဲ့ဝငျဟောငျးခှနျဆနျးလှငျသညျလကျရှိတှငျပအို့ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေဥက်ကဌဖွဈသညျ။ 
အောငျခမျးထ၊ PNO ၏ခေါငျးဆောငျ (ပအို့ဝျအမြိုးသားအဖှဲ့)
နနျးခငျဇယြော၊ Miss Myanmar International (၂၀၁၂)
^ Interactive Myanmar မွပေုံ၊
^ ခခ Pa-Oh အမြိုးသားအဖှဲ့ (၂၀၁၀) ။ Pyidaungzu De-Ga ပဟေ:ိပသမဂ်ဂပပွညျထောငျစု (ပွညျထောငျစုထဲကပအိုဝျးအဖှဲ့။ ပအို့ဝျအဖှဲ့။ စ။ ၂၃)
Ni Luပွီ ၁၀ ရကျ ၂၀၁၄ နီလူးဖငျး (မီးရော့ကကျပှဲတျောအကွောငျးသီခငျြး)
^ နန်ဒာခနျြ (မေ ၂၀၀၄) ။ ပအို့ဝျ - မလြေ့ော့သူမြား .ရာဝတီ။ 8 မတျလ 2012 ရယူရနျ။
^ ၂၀၁၄ ခုနှဈ၊ 2ပွီလ ၂ ရကျတှငျပွနျလညျရရှိခဲ့သောပအို့အျနအေ့ထိမျးအမှတျသတငျး
ဗနျးတငျအောငျ (အောကျတိုဘာ ၁၉၇၈) ။ ကိုလိုနီခတျေဗမာလူ့အဖှဲ့အစညျး (ကိုလိုနီခတျေသမိုငျးသမိုငျး) ။ စ။ ၂၂ ။
^ Tee Ree Ree Cover ဗားရှငျး ၂၀၁၄ ခုနှဈ၊ Aprilပွီ ၂ ရကျ
^ Sublime Frequency: ရှတွေိဂံ၏ဂဈတာမြား - မွနျမာရိုးရာနှငျ့ပေါ့ပျဂီတ (မွနျမာ)၊ Vol ။ 2. 18 2014ပွီ 2014 ထုတျယူ
Alt 22ပွီလ ၂၂ ရကျ၊
^ ကြျောကြျောဆု (ဇှနျ ၃ ရကျ) ။ "ဗဟုသုတမရှိရငျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့မကွိုးစားနိုငျဘူး" .ရာဝတီ။ 19 ဇှနျ 2014 ရယူရနျ။
The Pa'O (Burmese: ပအိုဝျးလူမြိုး, IPA: [pəo̰ lùmjóʊ], or တောငျသူ; Shan: ပဢူဝျး;Eastern Poe Karen|တံငျသူ;Sgaw Karen|တီင်္သူ; also spelt Pa-Oor Paoh) are the third largest ethnic nationality in Burma, withapopulation of approximately 1,800,000 to 2,000,000.Other name of Pa-O is PaU, Phya, Piao, Taungthu, Taungsu, Tongsu and Kula.
Pa'O women selling vegetables in an open-air marke
Fire Rocket FestivalEdit
The majority of Pa'O people follow Buddhism, which means that most of their festivals are based on Buddhist festival days. Some Pa'O are Christian, and some maintain Animistbeliefs. Poy Sang Long (Burmese: ရှငျပွုပှဲ; Pa'O: ပှယျနသြှငျနလောငျꩻ) celebrates the initiation of young boys as novice monks. On reaching adulthood, being ordainedamonk is consideredafamily celebration. During Buddhist Lent, from August to October, Pa'O youth participate in the Pwe Lip May Bo (Pa'O: ပှယျနလိပျ့ꩻမနေဗို; Burmese: မီးကွာလှညျ့ပှဲ) ceremony. On the monthly full-moon nights, new-moon nights, and both half-moon nights, they surround their local temple with lanterns suspended on strings raised by supporting bamboo stands. The bamboo stands are used to carry the lanterns around the temple three times, the candles being lit as they are carried, asashow of respect to Buddha.
Khun Sein Win, pen-name Kanbawza Maung Phone Yee, was born on 31 August 1948 in the village of North Inya in the southern Shan State of Myanmar. Since graduating from Mandalay Arts and Science University withaB.A., he has received many awards and prizes for his novels and feature magazine articles.His most famous book, I Want to Say, about Pa'O history, was published in 1985. He has written articles for the Myawaddy, Shu Ma Wa, Ngwe Tayi, Myat Mingala and Doh Kyaungthamagazines. Since 1993 he has chaired the Literature and Magazine Association in Taunggyi. He has worked as an editor for the Shan State Peaceful and Development Council monthly magazine, Kanbawza New Bulletin, and he has beenamember of the Shan State Women Committee. He lives in Taunggyi, where he continues to study and write literature. He is alsoarenowned speaker.
Khun Thar Doon (1940–1978) was one of the early recording stars of Pa'O music. He set up the first Pa'O modern band in the early 1970s. One of his famous songs is "Tee Ree Ree",asong about Pa'O solidarity. This song is still sung at traditional festivals today. He is on the cover of Guitars of the Golden Triangle: Folk and Pop Music of Myanmar (Burma), Vol. 2.Some of the artists appearing on the compilation cover songs he wrote.
Aung Kham Hti is the leader of the Pa-O National Organization (PNO). The party currently has three representatives in the People's Assembly, one in the National Assembly and six in the Local Assembly.Khun San Lwin,aformer member of the PNO, is currently Chairman of the Pa'O Self-Administered Zone.
ခွေသွဉ်းအဝ်းအွိုးယိုလဝ်းဟွိုန်လွေ,ဗာ; ပအိုဝ်; မွိုးဖါဖြားဆားပေ;တန်ဖူးဝေးအများ ဗွေ;/ခွန်/နင်, သီးဖုံ;ဗွေ;သြ။ နီးဗွေ;သီး အဝ်;ရပ်မဲုင်, အဝ်;ဒုံမဲုင်, အဝ်;ဝေင်,မဲုင်,တရို,တဝ်း ပအိုဝ်;သ,တင်,လိတ်မဲ့ငါ လောင်းကိုယို နီဗွေ;သီး မဉ်;မဲဉ်သွော့,ဒါ; သတင်, ကဗျာ ဝတ္ထုဒွေါင်; ဝတ္ထုဆွာ, ဓါတ်ပွုံ; ဇာတ်တွယ်, ငဝ်းသ,ချင်, ပျော;သွင်;ခါ;ရာ ထာ,တယွို့ စတဲင်, အကျောင်,ခါ;ရာ;နဲုင်းယိုဖုံ;နဝ်, အကျောင်,ခါ;ရာ; နဲုင်းမဲုင်တရို,တဝ်း နီဗွေ;သီးတဲမ်းထွူ တဲင် ပသာလွဉ် နွောင်,ဖေ;ဒျာ;ခွေသွဉ်း ခွန်ခမ်းနောင်ထျ,နဝ်သွူသြ။
မဉ်;ပသာတွမ်; Facebook Messenger နဝ်, ပသာနွောင်ဒျာ; လင့်လယိုသွူ သြ။ https://www.facebook.com/u.d.ma.146